Kofi Anan oo ku baaqay in isbedel lagu sameeyo QM iyo Golaha Ammaanka – idalenews.com
Kofi Anan oo ku baaqay in isbedel lagu sameeyo QM iyo Golaha Ammaanka
Xoghayhihii hore ee QM, Kofi Anan ayaa ku baaqay in la horumariyo Awoodda Golaha Ammaanka ee QM iyo in culayska la saaro Hawlgalladda Ciiddamadda Nabad-ilaalinta Caalmiga.
Kofi Annan ayaa hadalkaasi ka jeediyey Aqoon-isweydaarsi dhawaan lagu qabtay Jaamacadda Yale University oo ku taalla magaalladda New Haven ee dalka Maraykanka, wuxuuna xusay in loo bahan yahay in Isbedel lagu sameeyo Hay’addaha QM, gaar ahaan in la ballaariyo xubnaha Golaha Ammaanka ee QM, si aysan wax ugu dhimin Dowladaha kale iyo inay beerto iskaashi ay ka geystaan Hawlaha Golaha Ammaanka ee QM.
“Waxaan u malaynayaa inay lama huraan tahay Isbedelkaasi, waayo Adduunka waa isbedelay, sidoo kalena Caalamka wuu sii kordhay” ayuu yiri Kofi Annan oo isaga Xilka Xoghayaha Guud ee QM hayey muddadii u dhexeysay sannadihii 1997 ilaa 2008.
Kofi Annan oo 74 jir ah waxa uu xusay inay qalad weyn tahay inay dadka qaarkiisa u fekeraan inay QM leeyihiin, laakiin waxa uu xusay in QM la wada leenahay.
Kofi Anan oo isagu ahaa Xoghayihii Guud ee Toddobaad ee ay QM yeelato, ayaa ka hadlay baahida Caalamiga ee loo qabo Hawlgalldda Ciiddamadda Nabad-ilaalinta Caalamiga, wuxuuna xusay inay sii kordhayso baahidaasi.
Waxa uu sheegay in la joogo xilligii Isbedlka lagu samayn lahaa QM “Transformative time for the organization”iyo in la ballaariyo tiradda Hawlgalladda Ciiddamadda Nabad-ilaalinta QM, wuxuuna xusay inay ra’yigiisa la qabaan Dowladaha xubnaha ka ah QM.
Kofi Anan waxaa lagu xusuustaa mudaddii uu hayey xilka Xoghayaha Guud ee QM inay gacanka geystay Xakamaynta iyo La-dagaalanka Cuddurka HIV/AIDS iyo isagoo aad u mucaraday Faragelintii Ciiddamadda Maraykanka ee ay dalka Citaaq ku galeen sannadkii 2003.
Annan waxa kaloo uu ka hadlay Dagalladda weli ka sii socda dalka Syria, wuxuuna xusay inay Dowladaha Maraykanka iyo Raashiya waajib ku tahay sidii ay hayinka ugu qaban lahaayeen Qorshaha Caalamiga ee xalinta colaadaasi.
“Waxaan u malaynayaa inay xaalladda ka sii darayso. Waxaan filayaa inaan u baahanhay inay Golaha Ammaanka ee QM si wadajir isugu yimaadaan.
Dhinaca kale, Kofi Anan waxa uu magaalladda New Haven kaga qeyb galay Xaflad lagu maamusayey daabacaadda shan buug oo uu ka diyaariyey xilkiisii Hoggaaminta QM,
Mashruuca lagu daabacayey Buugaagtasi waxaa iska kaashaday Jaamacadda Yale iyo The City College of New York.
DAAWO SAWIRO Ka turjumaaya Nolosha soomaalida Muhaajiriinta ee Libya
Gudiga Xuquuqul Insaanka ee Baarlamaanka oo dalabaday in si deg deg loo sii daayo Wariyaha la xukumay